Mujaahidiinta Al-Shabaab Oo Khaarijiyey Askari Yugandhees Ah Oo Muddo Sanad Ah U Xirnaa. (DAAWO VIDEO) – Calamada.com
Mujaahidiinta Al-Shabaab Oo Khaarijiyey Askari Yugandhees Ah Oo Muddo Sanad Ah U Xirnaa. (DAAWO VIDEO)
calamada January 17, 2017 4 min read
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa khaarijisay maxbuus dagaal oo u dhashay dalka Uganda oo muddo ka badan hal sano ku jiray gacanta Mujaahidiinta, Iyadoona askarigan uu diray fariimo kala duwan ka hor inta aanan la toogan.
Filim kooban oo ay baahisay muâ€™asasada Al-kataaâ€™ib, garabka warbaahineed ee Xarakat Ash-Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu soo bandhigay fariin kooban uu jeedinayo Masassa taas oo lagu sheegay in ay tahay fariintii ugu dambeysay ee askarigan Ugandheeska ah.
Filimkan oo la daawan karo muddo sagaal daqiiqo ah wuxuu Masassa ku soo gudbinayaa laba fariimood oo kaliya, wuxuuna si cad u tilmaamayaa in dowladiisa iyo dadkiisaba ay meel cidla ah kaga dhaqaaqeen, islamarkaana uu naftiisa ku khamaaray isagoo raadinayo lacag maadama uu Soomaaliya u yimid si uu lacag kaga sameeyo.
Wax codsi ah uma gudbinin dowladiisa, Eheladiisa iyo siyaasiyiinta dalkiisa sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay in la iska dhaga tiray qeyla dhaantii iyo fariimihii uu horay u soo diray.
â€œWaxaan fariin kale u jeedinayaa saaxiibadeyda u diyaar garoobaya in ay soo raacaan isla safarkii aniga I keenay halkaan Soomaaliya ah. Xaqiiqdii waxa ugu weyn ee halkaan na keenaya waa lacag jaceel. Waxaan u baabaâ€™nay oo aan u dhimanay lacag darteed, welina waan sii wadnaa in aan u dhimano lacag jaceel darteed. Kuwa hadda u diyaar garoobaya in ay yimaadaan halkaan (Soomaaliya) Waxaan leeyahay: salka dhulka la hela oo si qota dheer kaga fikira dhamaan fariimaha aan idiin soo gaarsiiyey, ka dibna weydiiya naftiina haddii aad dalka ku laaban doontaan si nabad ah iyo cida idiin caawin doonta haddii gacanta lagugu dhigo adigoo maxbuus dagaal ah. yaa caawin doona qoyskaaga, yaa caawin doona waalidiintaada. Hadda oo aan idinla hadlayo aniga waxaa iga dambeeya oo aan wadanka kaga soo tagay qoyskeyga iyo waalidiinteydaâ€ ayuu yiri Masassa M.Y oo ah Askariga Maxbuuska ah ee la toogtay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale fariintiisa ku sii adkeeyey ciidamada UPDF-ta ah ee hadda u hanqal taagayaa in ay yimaadaan Soomaaliya si ay kaga helaan lacag ka badan inta ay ku helaan dalkooda, wuxuuna kula dardaarmay in ay si wanaagsan u fikiraan marka ay qaadanayaan goâ€™aankaas ee halista badan, wuxuuna u sheegay in halkan ay kaga soo horeeyaan waxyaabo badan oo ka gedisan waxa ay raadinayaan.
Marka aad qaadaneyso goâ€™aankaas halista ah ee aad ku imaaneyso Soomaaliya xisaabta ku darso xaalka aan aniga hadda ku suganahay. Xitaa haddii ujeedka uu lacag yahay, lacag waa laga heli karaa gudaha Uganda. Lacag lagama helo kaliya Soomaaliya. Waa suuragal in xitaa mushaar lagu helo wadanka aan ka soo tagnay ee Uganda. Waxaan rajeynayaa in aan noqono kuwa ku qanacsan waxa aan ku helno dalkeena. Waxa aad daba carareysaan ee aad ka raadineysaan dhul idin kaga fog waa wax aydaan calfaneynin sidaas darteed ku mahadiya quutka waliba oo aad ku heshaan dalkiina. Waxaan heli jiray waxa aan idiin sheegayo oo idil laakiin hadda dhamaantood waan waayey. Intaas waxaa sii dheer, xitaa waxaan waayey hantidii aan halkaan u imid in aan raadiyo marka aaway faaâ€™idadii aan kasbaday. Maxay caruurteyda kasbadeen? Maxay waalidiinteydu kasbadeen? hadaba marka aad u diyaargaroobeyso in aad timaado halkaan, salka dhulka la hel, maankana ku haay waxa halkaan kugu sugayaâ€ ayuu yiri.
Fariinta ugu dambeysay wuxuu Masassa u diray dowlada deriskooda ah ee Kenya, balse ka hor inta aanan fariintaas la soo gudbinin, waxaa filimka uu soo bandhigayaa qeyb ka mid ah muuqaalada weeraro kala duwan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka NFD ee ku hoosjira gumeysiga saliibiyiinta.
Weeraradan oo isugu jira dhabagal iyo weeraro toos ah, waxaa lagu bartilmaameedsanayaa saldhigyo iyo gaadiid ay leeyihiin ciidamada Police-ka Kenya.
Weeraradan waxaa ka mid ah howlgal xilli habeenimo ah lagu beegsaday saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hamey ee gobolka NFD kaas oo lagu dilay ugu yaraan 11 askari, laguna soo qabsaday gaari nooca ciidanka ah.
Dagaaladan ka dib, wuxuu markale soo muuqanaya Askariga Ugadheeska ah oo halkiisa ka sii wadanaya fariimihii uu dirayey. Markan oo la jooga il-biriqsiyadii ugu dambeeyey ee noloshiisa, wuxuu fariintiisa ugu dambeysa u jeedinaya Kenya, taas oo uu ka codsanayo in aysan marin dhabihii ay martay dowladiisa Uganda oo kale, islamarkaana aysan ku khamaarin nolosha maxaabiistooda ku jirta gacanta mujaahidiinta Al-Shabaab.
â€œFariinteyda ugu dambeysay waxaan u jeedinayaa dowlada aan deriska nahay, Kenya. Si gaar ah Uhuru, Madaxweynaha dalka Kenya. Waxaa jiray waqti aan kula hadalnay sida wadajir ah aniga iyo askartaada ka tirsan ciidamada Kenya. Waxaan kaa codsanayaa adigoo ah Abaanduulaha guud ee ciidamada Kenya, in aad askartaas u tixgeliso sida caruurtaada oo kale. Ha u ilaawin sida aniga la ii ilaaway oo kale. Aniga gabi ahaanba waa la I ilaaway, waana la iska key dhaga tiray. Tani waa markii saddexaad oo aan soo dhawaaqo anigoo caawin dalbanaya laakiin waxba iima tarin qeyla dhaantaas. Marka adiga ha iska dhaga-tirin dalabaadka muwaadiniintaada. Waa aragtay fariimahooda, waadna maqashay oohintooda iyagoo dalbanaya caawin sidaas darteed waxaan kaa codsanayaa in aad xusuusnaato, sidoo kalena caawiso.
Intaas marka uu jeedinayo, lana soo gaaro il-biriqsiyadii ugu dambeeyey ee filimka, waxaa la soo bandhigayaa Maxbuuskan oo ku labisan dareeskiisa dagaalka oo gacmaha ka katiinadeysan, islamarkaana fadhiya meel duur ah, ka dibna waxaa dhabarka dambe ka soo istaagaya mujaahid qalabeysan oo dhowr xabadood kaga dhufanaya qeybaha sare ee jirka.
Askarigan la toogtay wuxuu ahaa maxbuus dagaal oo Mujaahidiintu ay ku qabteen weerarkii Jannaale bishii September ee sanadkii 2015-ka kaas oo lagu dilay ugu yaraan 50 Askari, waxaana maxbuuskan uu horay u jeediyey fariimo dhowr ah oo uu madaxdiisa kaga dalbanayo in la sii daayo balse dowladiisa ayaa gabi ahaan iska indha tirtay calaacalkiisa, meel cidla ahna kaga dhaqaaqday.
Xuquuqda Warbixinta: Telegramka Idaacadda Andalus
Previous: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Iska Hor’imaadka Degmada Cadaado.
Next: Diyaarad Kusoo Dhacday Gobalka Nangahaar.